उकालो–ओरालो मोटर सरर गोरखकाली टायर बलियो गुड्छ हरर नेपाल टेलिभजनमा कुनै समय निकै बज्ने माथिको विज्ञापन धेरैले अझै सम्झेकै हुनुपर्छ । अहिले न त्यो विज्ञापन बज्छ, न त गोरखकाली टायरको चर्चा हुन्छ ।
तनहुँको पर्यटकीय गाउँ बन्दीपुरमा शुक्रबारदेखि तनहुँ पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सव सुरु भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उदेश्यले बन्दीपुर गाउँपालिका, बन्दीपुर युनिस्को क्लब र रोट्रयाक्ट क्लब दमौलीले महोत्सव आयोजना गरेका हुन् ।
दलीय विवादले न्यायिक समिति बनेन
दलीय विवादका कारण सात महिनासम्म नगरसभा नभएको कुश्मा नगरपालिका न्यायिक समिति गठनमा पनि अन्योल छ । नेकपा र कांग्रेसबीच कुरा नमिल्दा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हुनुपर्ने न्यायिक समिति अझैसम्म गठन हुन नसकेको हो ।
गुनासो गर्दै कर्मचारी
‘नगरपालिकामा अझै न्यायिक समिति बनेको छैन । दैनिकजसो आउने न्यायिक गुनासा हामीले कहाँ पठाउने ?,’ कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासकुमार लामिछानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीलाई आफ्नो समस्या सुनाए ।
भदौमै सुन्तला !
भदौमा पनि सुन्तला पाक्छ ? हिउँदमा सुन्तला पाकेको देख्नेहरूका लागि नौलो हो । यतिबेला पुतलीबजार– ११ मयाटारीका बोधराज अर्यालको बारीमात्रै होइन गमलामा लगाएका विरुवामा पनि सुन्तला पाकेका छन् ।
कारागारमा अहेवबाट सेवा
कास्की कारागार सञ्चालनमा आएको ५३ वर्ष भयो । कारागारको क्षमता उतिबेला ४० पुरुष र २० महिला राख्न सकिने थियो । सोही क्षमताअनुसार सरकारले कैदीबन्दीको औषधोपचारका लागि हेल्थ असिस्टेन्टको दरबन्दी तोक्यो ।